Kooxda Leicester City ayaa ku guulaysatay horyaalnimada Ingiriiska, tanina waxay noqonaysaa mid ka mid ah taariikhaha ugu waawayn ee dhanka ciyaaraha.
Barbarihii 2 iyo 2 ahaa ee Tottenham ay la gashay Chelsea ayaa sababtay guushaas cajiibka ah ee ay gaartay kooxda uu hogaamiyo tababare Claudio Ranieri.
Rajada Leicester ay ka qabtay koobka bilawgii xilli ciyaaraadka ayaa ahaa shan kun oo meeloodaw meel, xilli ciyaareedkii horana waxayba ku sigteen in ay ka mid noqdaan saddexda kooxood ee u dhibca hooseeya ee laga eryo horyaalka Ingiriiska.
Waxaa laga badiyay saddex ciyaarood xilli ciyaareedkan taas oo lagu tilmaamay wax cajiib ah. Kooxaha ugu soo dhawaa ee Spurs, Arsenal, Manchester City iyo Manchester United iyo Kooxda Chelsea oo koobka difaacanaysay ayaan midkoodna u soo dhawaanin kooxda lagu naanayso dawacooyinka ama Foxes.